Gbasara Anyị - Zhongnan Import and Export Co., Ltd.
Mbupu ụgbọ okporo ígwè
Azụmahịa Mba (wa (District 1)
Azụmahịa Mba (wa (District 2)
Azụmahịa Mba (wa (District 3)
International Trade Mart (Mpaghara 4)
Azụmahịa Mba (wa (District 5)
E guzobere Zhongnan Bubata na mbupụ Co., Ltd. na 2011 ma dị na Yiwu, China, obodo amaara ama nke mba ụwa ama ama. Companylọ ọrụ ahụ gụnyere nke Ngalaba Azụmaahịa Ọzọ, Ngalaba Akwụkwọ na Ngalaba Nkwakọba Ihe. Ọ kachasị na-etinye aka na azụmahịa niile metụtara mbubata na mbupụ, na-enye nsụgharị Spanish na Bekee, yana usoro azụmahịa mba ofesi maka ịzụrụ mba ọzọ, nyocha, na mbupu na China. Soro ndị ahịa niile na-azụ ihe na mpaghara niile nke China, chịkọta ma chekwaa mbupu, lelee ụdị na ogo ahụ, hụ na ogo nke ịzụrụ ndị ahịa, ma kwado uto nke ndị ahịa iji mezuo ọnụ.
Office onunu, ngwa, toy, ngalaba na-echekwa, ezumike onunu, okike onyinye, electronic ngwaahịa, igwe, wdg ...
Omenala ndi mmadu
Companylọ ọrụ ahụ na-agbaso ụkpụrụ nke "iguzosi ike n'ezi ihe, aha mbụ" na omume ọma, ma guzobe aha ọma na ndị na-azụ ahịa si mba ọzọ. Mgbe afọ 10 nke mmepe, site na onye ahịa mbụ ruo ugbu a, ndị ahịa dị na Peru, Bolivia, Mexico, Argentina, Colombia na ọtụtụ mba ndị ọzọ South America.
Anyị ji obi ụtọ na-anabata gị si n'akụkụ ụwa niile iji sonyere anyị ka anyị tolite ọnụ!
The ụlọ ọrụ nwere a ọkachamara technology mmepe otu na ọgaranya ọkachamara ihe ọmụma na ọgaranya R&D ahụmahụ na ubi nke netwọk na nkwukọrịta technology, nnukwu-ọnụ ọgụgụ nchekwa data ngwa, na a ọkachamara ọrụ otu na ezi mma na-enye elu-edu na oru oma ọchịchị na enterprise ahịa . Ndị otu ọrụ.
Companylọ ọrụ ahụ na-elekwasị anya na iwalite mmeghe nke ndị ọrụ na ọzụzụ na nkwado nke ndị ọrụ dị ugbu a. Dabere na atụmatụ mmepe ụlọ ọrụ ahụ, ụlọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu na-adọta ma na-abawanye ndị ọrụ aka ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ, nke mere na ọnụọgụ nke ndị ọrụ teknụzụ na-aga n'ihu na-abawanye, na-emecha ruo ihe karịrị 50%. N'otu oge, ọ na-ewusi ọzụzụ nke ndị ọrụ dị ugbu a. Dị ka mkpa ụlọ ọrụ na mmepe onwe onye si dị, ụlọ ọrụ ahụ na-enye ndị ọrụ ọzụzụ ọzụzụ. Otu bụ ịnọgide na-emeziwanye nkà na ụzụ site na mmụta na ịrụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ ahụ, ma n'otu oge ahụ iji kụziere ndị ọrụ ruru eru ọzụzụ mpụga. Iji melite ikike teknụzụ ha. A na-enye nkwado ọbụna na agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ. N'otu oge ahụ, ọ na-enye ụzọ ọzọ dị mma gbasara ụgwọ ọnwa, ụlọ na ọdịmma, ma na-anabata nnabata iji sonye na ụlọ ọrụ ahụ.
Mgbe afọ iri nke nchịkọta na afọ iri nke mmepe, ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ narị puku ndị ahịa. Mgbe ị na-azụlite azụmaahịa ya, ụlọ ọrụ ahụ na-eme ka mgbanwe ya dị ngwa, na-eme ka mmepe ya dịgasị iche iche, ma na-arụsi ọrụ ike na ikpo okwu e-commerce nke dị elu nke na-ezute njirimara nke ụlọ ọrụ ọrụ nke oge a.
Anyị pụrụ iche na Product Sourcing, Ozi atherchịkọta & Market Nduzi, àjà Sample, so Order, Order Following elu, Quality Control, Paykwụ Secgwọ ná Ntụkwasị Obi, Warehousing, Mbupu na mkpa mbupụ akwụkwọ na-eme wdg Anyị nwere ọkachamara mkpara izute ndị ahịa anyị mkpa, na anyị Mee ka ụlọ ọrụ jikọọ na-eme ka uru gị baa uru.
Adreesị: 26lọ 2602, Nkebi 2, Buildinglọ 3,
Ekwentị: tim: 13819962128
COMlọ ọrụ ụlọ ọrụ
YIWU, China, Mee 12, 2020 / PRNewswire / ...
ulo oru ike na-ebuli ụgbọala sa ...
Zhongnan Bubata na mbupụ Co., Ltd. bụ ...